दक्षिण कोरियामा आजबाट खोप अभियान सुरु हुँदै, नेपालीहरुले कुन चरणमा पाउलान खोप? – Kantipur Press
दक्षिण कोरियामा आजबाट खोप अभियान सुरु हुँदै, नेपालीहरुले कुन चरणमा पाउलान खोप?
लामो समयको पर्खाइपछि दक्षिण कोरियामा आजबाट कोरो’ना भाइ रस बिरुध्दको खोप महाअभियान सुरु हुँदैछ।
गत बर्षको जनवरी महिनामा पहिलो को’रोना भा’इरस पुष्टि भएपछिका दिनमा आजसम्म आइपुग्दा कुल संक्रमितहरुको संख्या करिब ९० हजारको नजिक पुगिसकेको छ।
आज पहिलो लटका १५ लाख डोज खोप बोकेर पानीजहाज तथा हवाइजहाजहरु कोरियाका बिभिन्न ठाउँमा प्रस्थान गरेसँगै यो अभियान सुरु भएको झल्को दखिएको छ।
पहिलो सिपमेन्टमा प्रयोग भएका ५५ वटा कन्टेनरहरु करिब २ घण्टा ढिलो प्रस्थान गरेका थिए। ढिलाई हुनुको कारण यो खोपलाई अति चिसो अवस्थामा राख्नुपर्ने भएकाले थप साबधानी अपनाउदा भएको हो। आजबाट सुरु हुने खोप अभियानको पहिलो ५ दिनमा एष्ट्राजेनेकाको खोप १ हजार ९०० केयर ह स्पिटलमा रहेका मानिसहरुलाई दिइने छ। एष्ट्राजेनेकाले उपलब्ध गराएको पहिलो चरणको डोजले ७ लाख ८५ हजार जनालाई २ डोजका दरले लगाउन पुग्ने देखिन्छ जुन यसअघि अनुमान गरिए भन्दा करिब ३५ हजार बढि हो।
ईपिएस साथीमा प्रकाशित समाचार
इपिएस कार्यालयले सार्वजनिक गर्यो कोरिया जाने सुची, उडान तालिका आउन बाँकी